Dailymotion in MP3 Converter: Beddelaan Dailymotion in MP3 Si fudud
> Resource > Beddelaan > 2 Easy Siyaabaha Beddelaan Dailymotion in MP3
Wixii ku caashaqi jiray music, Dailymotion waa meel wanaagsan oo laga helo videos music dambeeyay. Marka aad soo booqato Dailymotion iyo soo gaarto qaar ka mid ah videos music jeceshahay, waxaad had iyo jeer lahaa maayad si aad u hesho music ee MP3 ciyaaryahan si aad u tiraa karaa clips dhawaaqa ka jeclaan videos. Haddii ay sidaas tahay, waxaad dooran kartaa in loogu badalo Dailymotion in MP3. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa laba hab oo kala duwan si aad shaqo taas loo sameeyo. Just dooro mid sida ay baahidaada.
Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan ah oo dhan-in-mid app weyn - Dailymotion in MP3 Converter soo bixi videos dibna loogu badalo online Dailymotion videos in qaab MP3. Kale waa in la badalo MP3 ka Dailymotion si toos ah videos. App waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu soo saaro MP3 music ka mid online video oo aan laga badinin tayada audio. Haddii aad rabto in aad kaliya audio MP3 ah, aad kula taliyay in ay isticmaalaan habka labaad. Hagaha hoos ku qoran:
Qeybta 1: Sida loo soo dejisan iyo badalo Dailymotion in MP3
Qeybta 2: Sidee si toos ah loogu badalo online Dailymotion videos in MP3
Qaybta 1aad: Sida loo soo dejisan iyo badalo Dailymotion in MP3
Download, rakibi oo ay maamulaan Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ), kaas oo kaa caawin kara inaad kala soo bixi videos dibna loogu badalo Dailymotion in qaab MP3 oo aan wax khasaaro audio. Sidaas, oo ayan ku jirin MP3 files, waxa kale oo aad ka heli kartaa video Dailymotion ee files.
Tallaabada 1: Soo hel videos aad doonayay goobta Dailymotion
Intii lagu rakibo, waxaad u baahan tahay in ay sax daalacashada aad rabto in aad isticmaasho si ay u soo bixi Dailymotion videos. Hadda, isticmaal mid ka mid daalacashada internetka ay taageerayaan in ay soo booqdaan Dailymotion, ka dibna ka heli iyo ciyaaro aad jeceshahay Dailymotion videos.
Talaabada 2: Beddelaan Dailymotion in MP3
Hit sabayn "Download" icon muuqashada on sare ee video ah, ama nuqul ka URL video ee bar cinwaanka, ka dibna riix "+ dhaji URL" Button in interface Downloads ah.
Tallaabo 3: U beddelaan Dailymotion in MP3
In ay Library, sax sanduuqa si loo doorto aad audio doonayay, ka dibna riix "Beddelaan" ee geeska midig hoose, oo soo socda, si ay u tagaan "Common Audio"> "MP3" ee liiska dhisayaa-up qaab wax soo saarka. Ugu dambeyntii, guji "Ok" Macdan MP3 music video ka ah. Ka dib markii ay diinta ka, kaliya heli MP3 faylasha sida Jidka wax soo saarka.
Eeg sida loo badalo Dailymotion video in MP3 adigoo isticmaalaya AllMyTube.
Marka hore, soo baxdo iyo rakibi Streaming Audio Recorder . App Tani qabsan karo dhawaaqa wax ciyaaray dhex card kombiyuutarka. Sidaas intii lagu duubo, hubi in uu jiro kaliya Dailymotion geeyo codka maraya kaarka codka.
Talaabada 1: Burcad Dailymotion si MP3 Converter
Orod Wondershare Streaming Audio Recorder kadibna riix "Record" badhanka dhinaca kore ee bidix ee interface ugu weyn. Hadda, app tani waa heegan.
Talaabada 2: Raadi iyo ciyaaro ka videos music Dailymotion aad rabto
Tag Dailymotion.com, raadiyo videos music jecel aad ka dibna riix "Play" badhanka si ay u ciyaaro. Isla markiiba, app this toos ah lagu ogaan doonaa audio iyo bilaabaan in ay u Qoraynaa qaab MP3. Waxaa la samayn doonaa ilaa music ka istaago inuu u ciyaaro ama mar kale aad riix "Record" button. Ka dib markii in, waxaad ka heli kartaa Dailymotion MP3 music ee ay maktabadda.
Si aad u hesho MP3 files ah, oo kaliya xaq u riix mid ka mid file maqal ah maktabadda iyo dooran "Open ee folder" loo sameeyo. Haddii aad doonayso inaad ku darto si Lugood, riix "Add to Lugood" badhanka hoose ee interface maktabadda.